Maitiro ekugadzirisa kana kudzokorora zviyeuchidzo paApple Watch | Ndinobva mac
Munguva dzichangopfuura tiri kuona kuti smartwatch yeApple, iyo Apple Watch, irikumaka nzira yakakosha pakati pevashandisi veApple. Iyo wachi inoramba ichifambira mberi mukutengesa gore rega uye vanhu vazhinji uye vazhinji vatinoona mumugwagwa ne wachi pa wachi yavo.
Kugamuchira ziviso chinhu icho wachi inoita zvakakwana Uye ndosaka nhasi tichida kuratidza maitiro atingaite kana kuteedzera zviyeuchidzo zvatinogamuchira paApple Watch nenzira yakapfava uye inokurumidza.
Mune ino kesi uye nekutadza kana isu tichitenga wachi, zviziviso zvakagadzirirwa kuteedzera iyo iPhone marongero uye izvi zvinogona kugadziridzwa nemushandisi kuitira kuti zvakagadzirwa zvakanyanya kana kutitumira chiziviso kaviri. Mune ino kesi, zvakakosha kuti urangarire kuti maapplication akasanganiswa ndiwo anotibvumira kuti tigadzirise izvi, saka ngatione kuti tingaite sei.
Isu tinowana iyo Apple Watch kunyorera kubva ku iPhone
Dzvanya pane sarudzo Wangu wachi uye tinya paZiviso
Tinosarudza mashandisiro atinoda kugadzirisa uye ndizvozvo
Iye zvino tava kuona kuti kana uchiwana izvi zvinoshandiswa, mamwe acho anotipa mukana wekuchinja kubva ku "Duplicate iPhone" kuenda ku "Tsika". Pakudzvanya patsika muMessage application tinoona izvi zvatiri kuratidza mune inotevera skrini:
Sarudzo dzakajeka uye dzinotibvumidza kugadzirisa notices uye kunyange kudzokorora risiti yekuzivisa kusvika kagumi kana tichida. Chero zvazvingaitika, kwete ese maapplication anopa aya maitiro, asi zvinonakidza kuziva kuti vamwe vacho vanozvibvumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekugadzirisa kana kudzokorora zviyeuchidzo paApple Watch
Kutengesa kweAirPods kuri kuramba kuchikura, nepo HomePods ichiodza moyo
Tenga iMac kana AirPods iri kutengeswa pa eBay's superweekend